Usaise Email pane Yakapisa Burner! | Martech Zone
Mukupedzisira Delivra muenzi positi yaMartech, Neil yaisanganisira ongororo ichikubvunza iwe zvese zvimwe zvezvimhingamupinyi zvikuru zvawanga uchitarisana nazvo nezvirongwa zvako zveemail. Mumwe wavo aive iyo kushaya nguva kuzadzisa zvaidiwa. Ini ndinonyatsonzwisisa kumanikidzwa kwenguva; hapana panomboita seanokwana maawa muzuva!
Izvo zvataurwa zvakadaro, ndinokukurudzira kuti uite yako email chirongwa a chikosheshwa. Kana usati watanga chirongwa cheemail, inguva yapfuura nguva yekutanga. Kana iwe watanga chirongwa, asi wave uchichiregeredza zvinosiririsa, ndinokukurudzira kuti uwane nguva yekuongorora uye kuona kuti ndedzipi nzvimbo dzinoda kutarisirwa nekukasira. Usaise yako email chirongwa pane iyo zvinopisa musana!
Ongorora zvakare yako email kushambadzira zano
Tsvaira zvinyorwa uye kubvisa zvakaipa mazita
Gadzira nyowani uye zvirinani zvirimo
Update kopi inotarisa pakubata vateereri vako uye inovakurudzira kuti vaite
Kutora nguva yekutarisa pane yako email chirongwa chekushambadzira kungave mutsauko pakusvika kune yakakura vateereri, kuisazve vateereri vako varipo, uye kugadzira iyo yakakura ROI. Negore Idzva rinouya, ino ndiyo nguva yakakwana yekutora yako email email chirongwa pane yekumashure chinopisa uye chiite iyo yekutanga!
Tags: delivradelivra email kushambadziraemail itsva makore zanoemail nzira
nRerate Akawedzera Mapeji Ekushanya ne9.6%.
Pew Tsvagiridzo yepamhepo Chiitiko
Mbudzi 18, 2011 na1: 06 PM
Yakanaka post, @lavon_temple: disqus! Ini ndinogona kutaura, pachangu, kuti email yakave ine HUGE kukanganisa kukura kwedu paKushambadzira Technology Blog. Dai ndaiziva kukanganisa kwacho, ndingadai ndakazviita zvakakoshesa makore apfuura.